रेल द्वारा युरोप अनुभवहरू गर्नै पर्छ | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > रेल द्वारा युरोप अनुभवहरू गर्नै पर्छ
Europe is an incredible continent to अन्वेषण! हेर्न त धेरै संग, के र पत्ता लगाउन, यो अनन्त योजना सही स्थानको, युरोप रेल द्वारा अनुभव.
युरोप ट्रेन द्वारा अनुभव – पहिले बंद, लन्डन:
रेल अर्को युरोप अनुभव बन्द सुरु गर्नुपर्छ लन्डन! यो भने कि “A bad day in London is still better thanagood day anywhere else.” त्यसैले, का त्यहाँ सुरु गरौँ! पूर्ण अवश्य छ Harry Potter यात्रा वार्नर Bros को. स्टुडियो तपाईं एक सुपर-प्रशंसक छैनन् भने पनि. को प्रविधि, मोडेल र पछि-द-दृष्य बस अचम्मको र राम्रो देखेर लायक. यो spellbinding मा6घण्टा यात्रा, यस्तो प्लेटफर्म रूपमा मूल सेट हेर9¾ र Diagon गली; को Hogwarts एक्सप्रेस बाफ रेल हेर्न; कास्ट जस्तै broomstick सवारी, र स्क्रिनमा wizardry चलचित्रहरू 'को पछि-द-दृश्य रहस्य लेगी. यो Harry Potter स्टूडियो लन्डन भ्रमण दुईतर्फी कोच समावेश परिवहन र प्रवेश टिकट बारेमा वार्नर Bros को लन्डन Harry Potter यात्रा थप पढ्नुहोस्. प्रवेश संग स्टूडियो यहाँ.
पेरिस: हो भन्छन्’ TO AN ARTIST PAINTING YOUR PORTRAIT
रेल आफ्नो आगामी युरोप अनुभव पेरिस हुनुपर्छ. पिकासो समय मा, Montmartre मुख्य रूप पिउने प्वालहरू र पहाडको शिरमा रहेको होटलबाट हावा बाट चल्ने घट्रट भरिएको Bohemian स्वर्ग एक raffish नृत्य हल मा गरिएका थियो. आज, को ठाँउ du Tertre को Sacré COEUR को छाया मा सजिलै आफ्नो स्वरूपमा कब्जा गर्ने कलाकारहरूको भरिएको छ. त्यसपछि, संसारको सबैभन्दा प्रसिद्ध कला स्टुडियो भ्रमण, डुङ्गा Lavoire, जहाँ पिकासो चित्रित र Braque, जुआन GRI, र Modigliani एक पटक बस्ने.
जादुई MONTJUIC संग ट्रेन आफ्नो युरोप अनुभव सीढी माथि चढ्नुहोस्:
तपाईंको पछि रेल यात्रा पेरिस बाट, ट्रेन आफ्नो अर्को युरोप अनुभवहरू बार्सिलोना हुनुपर्छ. अब, हामी सुरू अघि गरौं गरेको यो सामान्यतः mispronounced शहर कसरी भन्न अभ्यास. धेरै अंग्रेजी वक्ता ध्वनि प्रयास ‘थप स्पेनिश‘ को 'ग pronouncing द्वारा’ मा बार्सिलोना एक 'औं रूपमा’ र भन्दै ‘Bar-the-lona’. तर कातालान मा (केटालोनिआ भाषामा, जहाँ बार्सिलोना is found), को 'ग’ एक को रूपमा उच्चारण गरिन्छ’ – त्यसैले 'बार-अप क्यानभास’ सही उच्चारण छ.
हामी बाहिर बाटो भनेर अब, गरेको Montjuïc पहाड कुरा गरौं. यो एउटा पत्तेदार टहलने लागि सही ठाउँ छ सुन्दर दृश्य. तपाईं आफ्नो पैदल भयो निश्चित (वा यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने चलिरहेको) मा जूता, यसलाई त्यहाँ माथि प्राप्त गर्न legwork एक बिट लिन गर्छ रूपमा, तर यो यो हो मतलब कम अन्य पर्यटकहरु द्वारा भीड. ठेस प्राकृतिक सेरोफेरो र शानदार दृश्य देखि, तपाईं देखि भवनहरु पाउनुहुन्छ 1992 ओलम्पिक खेल, सहित पलाउ संत JORDI and the telecommunications tower designed by Santiago Calatrava.
प्राग: सूर्यास्त एक मध्यकालीन ब्रिज साथ टहलने
प्राग युरोप को दिल रूपमा जानिन्छ. यो सुन्दर र केहि रहस्यमय शहर छ-देख्न पर्छ मा आफ्नो युरोप अनुभव रेल द्वारा यात्रा. 14 औं शताब्दीमा चार्ल्स ब्रिज को को विशाल थोक संग VLTAVA नदी पार 1000-वर्षीया महल यसलाई पछि सक्ने. रमाइलो; सम्म 1841, यो मात्र तरिका थियो नदी पार पुरानो टाउन देखि!
भेटी परी-कथा दृश्य, पैदल मात्र gothic पत्थर पुल संग लाइन छ 30 सन्तहरू को मूर्तिहरू र सबै भन्दा राम्रो भ्रमण प्रारम्भिक को जब साँझ सूर्य सेट छ. तपाईं आफ्नो महत्वपूर्ण अन्य त्यहाँ हुनुहुन्छ भने, यो एक लागि बनाउँछ धेरै रोमान्टिक सेटिङ.
भेनिस: एक ट्रक पाउनुहोस्!
यो cheesy लाग्न सक्छ, तर तपाईं भेनिस जाने हुँदा, शहर मार्फत एक ट्रक चढेर साँच्चै अवश्य छ. रमाइलो र रोमान्टिक हुनुको साथै, यो पनि शहर हेर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका हो! दिन एक ताजा Bellini लागि स्टाइलिश हैरी गरेको पल्ट गएर बन्द अन्त्य हुनुपर्छ. यो सेतो आरु रस र prosecco छ, जहाँ ककटेल पट्टी गरेको संस्थापक द्वारा आविष्कार भएको थियो.
रेल हाम्रो एशिया र युरोप अनुभव अनुपम इस्तानबुल छ
इस्तानबुल ब्लू मस्जिद लागि प्रसिद्ध छ. हामी यो सिफारिस, जबकि, we’d also like to draw your attention Istanbul is on the edge of Europe experiences by train, युरोप भन्दा एशिया यसको नजिक रूपमा.
इस्तानबुल मात्र छ जमीन माथि आकर्षक, तर पनि भूमिगत को Basilica Cistern संग (को Basilica). Byzantine ईन्जिनियरिङ् को यो उत्कृष्ट टुक्रा एक सास-लिनुभएको भूमिगत cistern, एक पटक इस्तानबुल गर्न वर्तमान बुल्गारिया देखि aqueducts संग खानेपानी ल्याउन. लाग्छ न्यानो प्रकाश, र ध्वनि नरम dripping पानी पृष्ठभूमिमा शास्त्रीय संगीत बजाई संग मिलेर. को walkways Tread र बीच माछा पौडनु हेर्न 336 छत समर्थन स्तम्भहरू.
जाऊ त्यहाँ SaveATrain.com to book your next train adventure in3मिनेट, मा सस्ता रेल टिकट दर.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-experiences-by-train%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
प्रशिक्षण सल्लाह रेल सुझावहरू रेल यात्रा travelfrance यात्रा travelspain टर्की